OnePlus 2 dia voasivana tanteraka ora maromaro alohan'ny fampisehoana | Androidsis
OnePlus 2 dia mivoaka tanteraka mandritra ny ora maro alohan'ny fampisehoana azy
Tao anatin'ny ora vitsy monja dia haseho amin'ny besinimaro ny iray amin'ireo terminal faran'izay andrasana indrindra amin'ity taona 2015. Ity no taranaka faharoa amin'ny finday avo lenta avy amin'ny orinasa monina any Shina, OnePlus. Rahampitso dia ho andro tsara ho an'ny orinasa kely aziatika, izay nanomana hetsika lehibe amin'ny fomba hanehoana ny terminal vaovao.
Ny OnePlus 2 dia telefaona andrasana fatratra, ary be ny tombantombana hatreto tamin'ity taona ity ary izany rehetra izany dia noho ny fahombiazan'ny orinasa tamina finday voalohany, ny OnePlus One.
Momba ny andiany faharoa, zavatra maro no efa tafaporitsaka ary ny iray amin'izy ireo dia ny famaritana azy ireo, izay efa voamarina. Anisan'izy ireo no ahitantsika ny faran'ny terminal 4 GB Memory RAM, mpanodina Snapdragon 810, dian-tànana, port USB-C, slot apetraka amin'ny karatra SIM roa sy fakan-tsary 13 Mega-pixel aoriana.
Mikasika ny fisehoany ara-batana, afaka nahita andro vitsivitsy lasa izay izahay hoe ho toy ny ahoana ny terminal a Fanamarinana TENNA sinoa. Noho ireo sary tafaporitsaka ireo dia niady hevitra momba ny fijerena ny fiantsonana vaovao ary raha ampy izany raha ny momba ilay teo alohany. Androany dia hitantsika indray ny fomba nivoahan'ny terminal hatramin'ny ora maro talohan'ny nanolorana azy, ka manamafy ny endrika voalohany hitantsika tamin'ny fanamarinana TENNA. Amin'ireto sary ireto dia hitantsika amin'ny antsipiriany bebe kokoa ny terminal vaovao.
Araka ny hita eo amin'ny sary, ny fitaovana dia toa lava elatra noho ny teo alohany. Ny ampahany eo anoloana dia zara raha misy sisiny eo amin'ny lafiny, ka toa ho efijery tanteraka ny OnePlus 2. Ny tapany aoriana dia mitovy amin'ny an'ny OnePlus One, toa izy io dia hanana fikitihana masiaka mitovy amin'ny mampiavaka an'io terminal sinoa io. Ny fitaovana fananganana azy dia avo lenta, miaraka amin'ny singa metaly amin'ny sisiny. Ho fanampin'izany, afaka mahita zavatra tsy dia misy dikany loatra isika fa miaraka amin'izay koa ireo singa manan-danja toy ny Flash indroa amin'ny fakan-tsary any aoriana, ny slot Dual-SIM na ny mpamaky ny dian-tànana.
Fantatsika izao ny zava-drehetra momba ny terminal ary tsy afaka miandry ny fanamafisana ofisialin'ny orinasa fotsiny isika hamela ireo fisalasalana nipoitra momba ny terminal Sinoa vaovao. Hihaino tsara izay rehetra hitranga rahampitso isika, mba hahafahantsika manazava amin'ny antsipiriany ny vaovao izay hoentin'ny OnePlus 2 vaovao ho antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus » OnePlus 2 dia mivoaka tanteraka mandritra ny ora maro alohan'ny fampisehoana azy
Ity no S-Pen an'ny Samsung Galaxy note 5
Avereno jerena amin'ny teny espaniola ny fakan-tsary Yi Action avy amin'i Xiaomi, ny GoPro Hero 3 latsaky ny 100 Euros